၂၀၁၂-ကိုအကောင်းမြင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဆက်ပြီးလျှောက်မယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၂၀၁၂-ကိုအကောင်းမြင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဆက်ပြီးလျှောက်မယ်
Posted by phone_kyaw on Dec 27, 2011 in Copy/Paste |7comments
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု၊ ရွာတွေအရွှေ့ ခံရမှု၊ လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ချိူးဖောက်ခံရမှုတွေလည်း မြင်နေကြားနေရတယ်။ ဒီနေရာမှာ မကြားရတာက စီမံကိန်းကနေ အမြတ်ငွေဘယ်လောက်ရမှာလဲ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်ေ
လာက် ဖန်တီးပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာကို စာရင်းဇယားနဲ့ မတွေ့ ရသေးဘူး။ စီမံကိန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာတောင် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေအများစုက ပြည်တွင်းက မဟုတ်ပဲ ပြည်ပနေခေါ်ယူတင်သွင်းနေတာကို မြင်နေရတယ်။ဥပမာ မြစ်ဆုံမှာ တရက်ကားမောင်းတဲ့လူတောင် တရုတ်တွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပါ။ ရခိုင်ဘက်က ရွှေဂစ်စီမံကိန်းမှာလည်း ကိုယ်တော်ချောတရုတ်တွေပဲ နေရာတိုင်းမြင်နေရတော့ တိုင်းပြည်ထဲက လူတွေသူများကိုတောင်ခိုင်းစားနေရပြီလို့ တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
အစိုးရကသာ နဲနဲလေးပျော့လာရင် အတိုက်အခံကော ပြည်သူကော အလိုလိုပျော့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်စည်းလုံးစေချင်ရင် ဒိထက်ပိုပြီးပျော့ပြောင်းတဲ့ချည်းကပ်မှုတွေနဲ့ အတိုက်အခံကိုချည်းကပ်ကြည့်ပါ။ အတိုက်အခံကလည်း မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပဲ မကြည့်ပဲ ပြေလည်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်းကိုလည်း ရှိထားစေချင်တယ်။
((((၂၀၁၂-ကိုအကောင်းမြင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဆက်ပြီးလျှောက်မယ် )))) ဆိုလို့သာဓု ဗျာ သာဓု..
ဟေ့လူ ကိုဘုန်းကျော်.. ကျုပ်ခင်ဗျားကို အကြံဥာဏ်ပေးချင်တာက သူတပါး သုတ ရသ ရမယ့် စာမျိုးဘဲ ကြိုးစားရေးပါလို့ .. ကောင်းသော စာတွေကိုဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျာ…
နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးတဲ့. ယောင်္ကျားပါးစပ်က ထွက်တဲ့ ကတိ တည်ပါစေဗျာ….
ဟိုတစ်နေ့ ကတင်.အယ်ဒီတာတွေကို ကစ်ပြီး ရန်တိုက်ပေးသွားတယ်
အဲဒီ ငပုံးကျော်က စိတ်မှန်တာမဟုတ်ဘူး..
စီမံကိန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာတောင် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေအများစုက ပြည်တွင်းက မဟုတ်ပဲ ပြည်ပနေခေါ်ယူတင်သွင်းနေတာကို မြင်နေရတယ်။ဥပမာ မြစ်ဆုံမှာ တရက်ကားမောင်းတဲ့လူတောင် တရုတ်တွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပါ။ ရခိုင်ဘက်က ရွှေဂစ်စီမံကိန်းမှာလည်း ကိုယ်တော်ချောတရုတ်တွေပဲ နေရာတိုင်းမြင်နေရတော့ တိုင်းပြည်ထဲက လူတွေသူများကိုတောင်ခိုင်းစားနေရပြီလို့ တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဖြစ်စေချင်တာက ဒီလိုစီမံကိန်းတွေမှာ မြန်မာတွေကို သုံးပုံပုံရင် နှစ်ပုံလောက် ခန့် သင့်တယ်။ သူများတွေနဲ့ တွဲပြီး ပညာယူသင့်တယ်။ အခုတော့ မြန်မာတွေဟာ စီမံကိန်းတိုင်းမှာ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ လက်နဲ့ မြေတူးတာ ဘေးကနေ သူများတွေကို ကူညီတာပဲတွေ့ နေရတယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ဒီအဆိုလေးကိုတော့ထောက်ခံပါတယ် အင်မတန်မှဝမ်းနည်းဖို့တဲ့ကိစ္စလေးတွေပါ အစိုးရက မသိတာလား မသိဟန်ဆောင်နေတာလားတော့မသိပါဘူး ပညာတတ်လူငယ်တွေအများကြီးပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါတယ် ဒီလိုအခွင့်အလမ်းကို အစိုးရက ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျပြဌာန်းသင့်တယ်။ အစိုးရက အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးဖို့ စာလေးတစ်စောင်လောက်ထွက်နေရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး တကယ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်သင့်ပါတယ် တရုတ်တွေက ကို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတာကို မြင်နေရတာမို့ တကယ်ကို မခံချင်စရာအကောင်းဆုံးပါ
ရွာထဲက မမှန်ဆိုသူလေးကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်တွေလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ စေတနာအပြည့်နဲ့ဆိုပဲ…။ သနားလို့ဆိုလား ဘာလား…။ မမှန်ရေ..နင်တို့အမျိုးတွေ မကောင်းကြောင်း ရွာထဲလာဖွသူရှိနေပြီ။ ဒါကြတော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေရလား….။ ငါ့တုန်းကကြတော့ ပြောလိုက်တာ ရစရာမရှိအောင်။ နင်မပြောရင် ငါပြောမယ်..နင့်ကိုငါခြစ်ချင်တယ်…ဂျစ် ဂျစ် ဂျစ်…။
လူတွေ .. လူတွေ … အမှတ်ကို မရှိဘူး … ။ မိအေး ကမှ နှစ်ခါနာသေးတယ် … သူတို့က သုံးလေးကြိမ်နာတာတောင် မမှတ်သေးဘူး … ။ ဒီလူရေးသမျှ ဂွကျကျတွေချည်းမို့ …. ပြန်မဆွေးနွေးလျှင် တယောက်ထဲ လေသွားမှာပဲ … ။ လက်မစောင့်စည်းမှုကြောင့် … သူလည်း နေပျော်သွားပြန်ပြီ … ။
ရေးချင်တဲ့လူရေး…… နာကတော့ … ယနေ့မှစ နှစ်တရာတိုင် သူ့ပို့စ်အောက်မှာ ကော့မန့် လုံးဝ လုံးဝမရေးတော့ပါ … ။ဆဲချင်ဆဲ ဆိုချင်ဆို .. သောက်ရေးလုပ်ပြီး မဖတ်တော့ပါ …. ။
သူ့ပို့စ်မှန်းမသိလို့ ကလစ်နှိပ်ရင်း ရောက်လာလို့ ရေးလိုက်မိပြန်တယ် … နောက်ဆို ဆင်ခြင်တော့မယ် ။ :mad:
ဒီလူဗျာ. အသံကောင်းဟစ်လို့ ။သူ့ စာကိုလက်မခံတဲ့ အယ်ဒီတာကိုစောင်းဆဲသလိုလိုနဲ့ သိမ်းကျုံးဆဲသွားလိုက်တာ။